२०७८ श्रावण ९ शनिबार १०:४३:००
मन्त्रीको शपथ खान तनहुँबाट हिँडेका विश्वकर्मा पोखरा नपुग्दै अर्कै नियुक्त
उत्पीडित परिवारमा जन्मिनुभयो, राजनीतिमा स्थापित हुन कस्ता–कस्ता संघर्ष गर्नुभयो ?
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीका पिता गोबर्द्धन शर्माले ०३६ सालमा मलाई कांग्रेसको सदस्यता दिनुभएको हो । मेरो पिता चंखवीर विश्वकर्मा र उहाँले सँगसँगै राजनीति गर्नुभएको हो । मेरो पितालाई पनि उहाँले कांग्रेसको राजनीतिमा सँगै लिएर हिँड्नुभएको थियो ।
गोवर्द्धन सर आँखा देख्नुहुन्थेन, कृष्णचन्द्र सरले नै मलाई चिनाइदिनुभएको थियो । उहाँले मलाई ‘बुबाले हिँडेको बाटो हिँड्नुपर्छ, परिवर्तन हुन्छ, दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । महिला, उत्पीडित क्षेत्र, जाति, वर्गको हित हुन्छ, हकअधिकार पाइन्छ’ भनेर सम्झाउनुभएको हो ।
म १५–१६ वर्षको हुँदादेखि नै मेरो पिताले पनि मलाई ‘प्रजातन्त्रका लागि लड्नुपर्छ, राजनीतिको बाटो हिँड्नुपर्छ’ भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो । पछि म २०–२२ वर्षको बुझ्ने भएँ, अनि राजनीतिमा लागेँ ।
राजनीतिक जीवनमा अप्ठ्याराहरू त थुप्रै आएका छन् । सबै पचाउँदै हिँडेको छु । कहिल्यै पनि पद पाइयो भनेर मात्तिने र पाइएन भनेर आत्तिने बानी परिसकेको छ । ०५४ सालमा भने सामाजिक दुर्व्यवहारको अलि नमज्जाको घटना भयो । तनहुँमा नारायण पौडेल भन्ने व्यक्तिले लगाएको महायज्ञमा गएको थिएँ, त्यसक्रममा मलाई ठूलो अपमान भयो ।
पैसा संकलन गर्ने कार्यक्रम थियो, मैले आर्थिक सहयोग गरेँ, तर अपमान गरियो । त्यहाँको आयोजक समितिका प्रतिनिधिले आर्थिक सहयोग गरेपछि दिनको १२ बजे सम्मान गर्ने भने । मैले ‘किन दिनको १२ बजे गर्ने’ भनेर सोधेँ । उनीहरूले ‘१२ बजेको समयमा सबै बुढा मान्छेहरू भात खान बाहिर जान्छन् र मण्डप खाली हुन्छ, त्यही मौकामा तपाईंलाई सम्मान गर्ने’ भने । त्यसपछि मैले इन्कार गरेँ । त्यसपछि म ‘सम्मान चाहिँदैन आन्दोलनको तयारी गर्छु’ भनेर हिँडेँ । त्यो वेला मेरै नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन पनि गरियो । पछि आयोजक समितिका अध्यक्ष नारायण पौडेल, प्रतिनिधिलगायतले ‘गल्ती भयो’ भन्दै माफी मागेका थिए ।
अहिले पार्टीमा कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ?
महाधिवेशन प्रतिनिधि दुई कार्यकाल भएँ । ०५४ सालमा दलित संघ स्थापना भएपछि तीन कार्यकाल जिल्ला सभापति भएँ । अहिले पनि केन्द्रीय सदस्य छु । महाधिवेशन प्रतिनिधि छु । ०४९ देखि ०५९ सम्म दश वर्ष नगरपालिकाको वडा सदस्य भएँ । यहीबीचमा दलित विकास समितिको बोर्ड सदस्य पनि भएँ । ०६६ देखि ०६८ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य भएँ । ०७४ को निर्वाचनदेखि प्रदेश सभाको सदस्य छु ।
प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीभित्र कहिलेदेखि छलफल भएको थियो ?
हाम्रो पार्टीबाट कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि कुरा आएका हुन् । हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिफारिस गर्नुभएको थियो । तनहुँ घर भएकै नेताहरू शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल सबैको सहयोग थियो । व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले कसैको चित्त दुखाउने काम गरेको थिइनँ । मैले पनि ‘एकपटक मलाई मौका दिनुहोस्, जनताका लागि काम गर्छु’ भनेको थिएँ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि आश्वासन दिनुभएको थियो । ‘गोवर्द्धन शर्माको छोरो कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइरहँदा चंखवीर विश्वकर्माको छोरो मन्त्रिपरिषद्मा नहुँदा अपूरो हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । हिजो (बिहीबार) साँझ मात्रै पोखराबाट तनहुँ घर फर्किएको थिएँ । मलाई बिहान ७ बजेतिर मुख्यमन्त्रीको छोरीबाट फोन गरेर ‘केहीबेरमा शपथका लागि आउनुहोला, कुरा भइरहेको छ’ भनेर खबर आयो । त्यसपछि तयारीसाथ म पोखरा जाँदै थिएँ । बाटोमा नै अर्कैले शपथ खायो भनेर खबर आयो ।
कसले यस विषयमा जानकारी दियो ?
इमानदारीपूर्वक भन्दा मिडियाबाट यो कुरा थाहा पाएको हुँ । म दगनगौडा पुगेका वेला मुख्यमन्त्रीको छोरीले फोन गरेर ‘अंकल आउँदै हुनुहुन्छ नि, केही गडबड होलाजस्तो छ’ भनेर भनेकी थिइन् । तर, नभन्दै अर्कैलाई शपथ गराइयो । यस विषयमा मलाई अहिलेसम्म कुनै नेताले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएको छैन । केही कारण पनि खुलाइएको छैन । मन्त्री बनाउने सूचीमा राखेको कुरा त मलाई सबै जानकारी थियो । मुख्यमन्त्रीले नै आश्वासन दिइरहनुभएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिफारिस गर्नुभएको र पारिवारिकजस्तै सम्बन्ध भएकाले कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि त्यहाँभन्दा विश्वास गर्ने आधार अरू हुनै सक्दैन थियो । केन्द्रका नेताहरू सबैसँग पनि मैले ‘आशीर्वाद दिनुहोस्’ भनेर मागेकै थिएँ । तैपनि हुन सकिएन ।
पार्टीको यस्तो निर्णयपछि तपाईंले नेताहरूलाई केही सोध्नुभएन ?
मलाई एकाएक रोकिएपछि धेरैैलाई भनिनँ, वरिष्ठ नेता पौडेललाई जानकारी गराएँ । उहाँले ‘यो ठूलो अपराध गरे, पाप गरे । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?’ भन्नुभयो । उहाँले दिउँसो निर्णय हुने वेलामा पनि ‘दोबाटेलाई नै बनाउनुपर्छ’ नै भन्नुभएको रहेछ । तर, उहाँले थाम्न सक्नुभएन वा के भयो थाहा छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पनि सोधेको थिएँ । उहाँले ‘सरी ! मन्त्री बनाउन सकिनँ, पार्टी नेतृत्वबाटै दबाब आयो’ भन्नुभयो । त्यसपछि धेरै कुरा भएन । उहाँ पनि व्यस्त हुनुभयो ।
अन्तिम समयमा पार्टीको कुन नेताबाट यस्तो दबाब आयो र उत्पीडित वर्गको तपाईंलाई मन्त्री बन्नबाट रोकियो ?
यसको जवाफ मसँग छैन, मुख्यमन्त्री पोखरेल र पार्टीका मुख्य नेताहरूलाई नै थाहा होला । म पीडामा भएको मान्छेलाई तपाईंले सोध्नु पनि राम्रो भएन, उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् । पार्टीका आन्तरिक विषयहरू धेरै होलान्, मैले कसैलाई दोष दिनु छैन । आलोचना गर्र्नु मेरो नैतिकताले दिँदैन । केही सूचनाहरू आएका छन् । तर, म फलानाले यस्तो गरे, त्यस्तो गरे भनेर भन्दिनँ । मेरा लागि यो धेरै ठूलो अपमानको विषय हो, तर जति अपमानको विषय भए पनि मैले पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले सहनुपर्ने हुन्छ । तर, देश र मिडियाले जसरी उत्पीडित समुदाय, महिला, छिडिएको क्षेत्र जसरी चासो राखेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद भन्छु ।
पार्टीले गरेको निर्णयप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेकाले भनेको होइन, तर जसरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ त्यो अहिलेको संविधान तथा लोकतन्त्रले गरेको सुनिश्चितता र संवैधानिक व्यवस्थाकै अपमान हो । मेरो व्यक्तिगतभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थाको अपमान भयो कि भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ । म व्यक्ति भनेको केही होइन, तर संविधानले त समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । सबै वर्ग र समुदायलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारले उठाएको प्रश्न भनेको त्यो संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्राप्त भए कि भएनन् भन्ने हो । अस्ति, केही दिनअघिसम्म केपी ओलीले संविधान मिचे भनेर आवाज उठाइरहेका थियौँ । अहिले सामान्य एउटा पिछडिएको बोल्न नसक्ने वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने, जति पनि पीडा छन् सहेर बस्न सक्ने खालको व्यक्तिलाई चाहिँ ‘न्याक्ने’ भनेको कतिसम्म न्यायोचित छ भन्ने विषय त सबैले बुझेकै छन् ।
अब अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ ?
कार्यकर्ताका नाताले पार्टीले गरेका निर्णय स्वीकार गर्ने मेरो कर्तव्य र बाध्यता हुन्छ । म पार्टीभन्दा माथि छैन । मेरो परिवार भने पनि, बाउ भने पनि, आमा भने पनि, सम्पत्ति भने पनि यही पार्टी हो । पार्टीले न्याय गरे पनि गर्‍यो, अन्याय गरे पनि गर्‍यो, मैले त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ । मेरो कर्तव्य यही हो भन्ने लाग्छ ।
सार्वजनिक पदमा ठेकेदारको बाहुल्य हुनु भनेको लोकतन्त्रको विकृत रूप हो : लोकराज बराल, विश्लेषक
ठेकेदारहरूको बाहुल्य सार्वजनिक पदमा हुनु भनेको लोकतन्त्रको विकृत रूप हो । यसले चुनावदेखि सरकारसम्म सबै ‘मनीपावर’बाट परिचालित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राजनीतिकर्मीलाई पनि पैसा चाहिने भएकाले यसले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ । राजनीतिको स्रोत नै ठेकेदार हुने अवस्था बनेको छ ।
यो विश्वभर हुन्छ, सच्याउन गाह्रो छ । नेपाल त झन् गरिब मुलुक भएकाले यहाँ यसको झनै बिगबिगी छ । अहिले धेरै पैसा दिएर तुरुन्तै सांसद र मन्त्री बनाइएका छन् । ठूलाठूला व्यापारिक घरानाका मान्छे ती पदमा गएको देखिएकै छ।
यसले वास्तविक अधिकार पाउनुपर्नेले गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा नै एकजना दलित समुदायको व्यक्तिलाई आश्वासन दिएर पनि मन्त्री बनाइएन । हाम्रो मुलुकमा दलित सबैभन्दा पिछडिएको समुदायमा पर्छ । त्यसमा पहाड र मधेस दुवै क्षेत्रका दलित पर्छन् । लोकतन्त्रमा समावेशीकरण भनिन्छ, तर देखाउनका लागि मात्रै केही पात्रलाई नियुक्त गरिन्छ र सिंगो समुदायलाई शोषण गरिन्छ । त्यसैले यसलाई कर्मकाण्डी लोकतन्त्र पनि भनिन्छ ।
यति ठूलो परिवर्तन भयो, संविधानमा समावेशीकरणको विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानअनुसार मात्रै प्राथमिकता दिँदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा इमानदारिता देखिँदैन, प्रतिबद्धता छैन । देखाउनका लागि मात्रै महिला, दलित, थारू, जनजातिलगायतलाई स्थान दिन्छन् । तर, उनीहरूको सशक्तीकरणमा कहीँ पनि उल्लेखनीय स्थान दिएको देखिँदैन । अहिले मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्दा पनि यसको प्रस्ट चित्र देखिन्छ ।
यसलाई राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले महसुस गरेर सच्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले उहिल्यै लोकतन्त्रलाई नयाँ ढंगले परिभाषित र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसलाई सच्याउन राजनीतिमा चेतना, संस्कार र न्यूनतम मूल्य–मान्यता हुनुपर्छ ।
- भरतबहादुर केसी : (सुजाता कन्स्ट्रक्सन) भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखा
- गोर्खबहादुर केसी ‘सन्देश’ : (यती बिल्डर्स) आठबिसकोठ नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम)
- भीमबहादुर साउद : (राजेन्द्र निर्माण सेवा) परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा
- मुरारीप्रसाद खतिवडा : (सनम कन्स्ट्रक्सन) खाँदबारी नगरपालिका, संखुवासभा
- विदुर लिङथेप : (वन्दना कन्स्ट्रक्सन) मादी नगरपालिका, संखुवासभा
- किरण सिंह : (सानु कन्स्ट्रक्सन) कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलवस्तु
- नेत्रराज अधिकारी : (अधिकारी निर्माण सेवा) शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु
- भीमबहादुर थापा : (तिरुपति निर्माण सेवा) सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी
- भूपेन्द्रबहादुर चन्द : भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत
- शिवप्रसाद ढकाल : सुन्दरहरैचा नगरपालिका, मोरङ
- रविन राई : रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ
- पदमबहादुर गिरी : (आशिष निर्माण सेवा) बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा
- अमरसिंह धामी : (मालिकार्जुन निर्माण सेवा) शैलिशिखर नगरपालिका, दार्चुला
- सन्जु पण्डित : (पण्डित निर्माण सेवा) विदुर नगरपालिका, नुवाकोट
- लबशेर विष्ट : (इन्द्रायणी निर्माण सेवा) थाहा नगरपालिका, मकवानपुर
- शिवराज खड्का : दिपायल सिलगुडी नगरपालिका, डोटी
- खड्ग नेपाली (शिखर कन्स्ट्रक्सन) थाहा नगरपालिका, मकवानपुर
ठेकेदार गाउँपालिका अध्यक्ष
- सन्तोष केसी : (सन्चाद कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स) छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान
- ध्रुव श्रेष्ठ : लिखु तामाकोसी गाउँपालिका, नुवाकोट
- प्रेमबहादुर तमाङ : (पि एण्ड के निर्माण सेवा) खाडादेवी गाउँपालिका रामेछाप
- यमबहादुर मल्ल : (रामकृष्ण निर्माण सेवा) जलजला गाउँपालिका, पर्वत
- बलबहादुर गुरुङ : (साइनो कन्स्ट्रक्सन) आलिताल गाउँपालिका, डडेल्धुरा
- पासाङ नुर्बु शेर्पा : (अरुण बरुण सेवा) चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा
- श्रवण जिसी : (एसएसएस निर्माण सेवा) सुनकोसी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक
- हिमद लामा : (ब्लोन निर्माण सेवा) भीमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर
- रामकुमार श्रेष्ठ : (आरके निर्माण सेवा) फाकफोकथुम गाउँपालिका इलाम
- जितबहादुर राई : (जोगमाई निर्माण सेवा) माइजोगमाई गाउँपालिका, इलाम
- बालकृष्ण आचार्य : (महेश निर्माण सेवा) मालारानी गाउँपालिका, अर्घाखाँची
- रोहित कार्की : केराबारी गाउँपालिका, मोरङ
- कालिबहादुर शाही : (पूर्णा निर्माण सेवा) जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा
- हरिबहादुर रोकाय : गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा
- आशा तामाङ : (सामरी कन्स्ट्रक्सन) म्यागङ गाउँपालिका, नुवाकोट
- योविन्द्रसिंह तामाङ : (याङरिला कन्स्ट्रक्सन) दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट
- ध्रुव श्रेष्ठ : (गुलीभर कन्स्ट्रक्सन) लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट
- तेजबहादुर तामाङ : (टी एन्ड बी कन्स्ट्रक्सन) पञ्चकन्य गाउँपालिका, नुवाकोट
- कान्छालाल जिम्बा : (जिम्बा कन्स्ट्रक्सन) महाभारत गाउँपालिका, काभ्रे
- ईश्वरचन्द्र पोखरेल (एकता कन्स्ट्रक्सन) तामाकोसी गाउँपालिका, दोलखा
- युधिष्ठिर खड्का : (हिमाली देउढुंगा निर्माण सेवा) बिगु गाउँपालिका, दोलखा
- गजेन्द्रबहादुर खड्का : (तुलसी निर्माण सेवा) रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर
- इन्द्रबहादुर भण्डारी : केदारस्यूँ गाउँपालिका, बझाङ